Wararkii Ugu Dambeeyay Qarax Ka Dhacay Duleedka Boosaaso. – Bogga Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Qarax Ka Dhacay Duleedka Boosaaso.
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in weerar khasaara badan dhaliyay lagu qaaday maleeshiyaat katirsan maamulka Ashahaadda ladirirka ee Puntland.
Qarax aad u xooggan ayaa deegaanka Sugurre ku qabsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidanka Argagaxisa ladirirka isku magacaabay ee sida tooska ah u hoos taga hay’adaha calooshood ushaqeystayaasha ah.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in gaari nuuca dagaalka ah oo ay wateen ciidan miina baaris ah uu qarax qabsaday kadibna halkaasi ayuu ku gubtay,waxa uu qaraxan si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Sugurre iyo Galgalo ee duleedka magaalada Boosaaso.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin qaraxaasi ay la haleen gaari Cabdi Bile ah oo ay la socdeen maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Puntland gaariga ayaa goobta ku burburay sidoo kale waxaa qaaxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday maleeshiyaatkii la socday gaarigaasi.